Barnaamijka Horumarinta Mustaqbalka CERB - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada (CERB)|Barnaamijka Hormarinta CERB
Barnaamijka Hormarinta CERB
Dulmarka Guud ee Barnaamijka Hormarinta
Dawladaha hoose iyo qabiilooyinka Hindida ee federaalku aqoonsan yahay ee gobolada miyiga ah iyo bulshooyinka reer miyiga ah ayaa dalban kara barnaamijka Hormarinta Rajada (PD) haddii daraasad lagu samaynayo suurtogalnimada dhaqaalaha la sameeyay ayna muujineyso in horumarka ganacsi ee gaarka loo leeyahay ay u badan tahay inuu ku yimaado horumarka bulshada.
Shuruudaha kale waxaa ka mid ah:
• Caddeymo muujinaya in mashruucu horseedi doono abuurista tiro shaqooyin ah oo joogto ah ama abuuraya maal-gashi raasamaal oo gaar loo leeyahay.
• Muuji baahida loo qabo kaalmada CERB iyo in aan meel kale oo maalgelin ah laga heli karin waqtigeeda.
Qorshaynta, helitaanka, dhismaha, dayactirka, dib u dhiska, badalida, dhaqan celinta, ama hagaajinta:
Codsadeyaasha uqalma waxaa ka mid ah:
Barnaamijka Hormarinta Rajada ayaa u adeegta Degmooyinka Miyiga iyo Bulshooyinka Reer Miyiga ah KALIYA. CERB waxay bixisaa amaahyo $ 2 milyan ugu badnaan halkii mashruuc. Deeqaha waxaa la heli karaa illaa 25% ee wadarta abaalmarinta, oo lagu go'aamiyay nidaamka hoos-u-dhigista iyo saamiga caymiska adeegga deynta (DSCR).
Codsadayaasha waa inuu:
• Bixinta 50% u dhigma lacagta kaashka ah ee wadarta kharashka mashruuca.
• Muuji suurtagalnimada dhaqaalaha iyadoo la taageerayo daraasad.
Liiska Hubinta Xadka Barnaamijka
Liistada Hubinta ee Xaddiga Horumarinta. Tani waxay gacan ka geysan doontaa hubinta in arjiga la soo gudbiyay la dhammaystiro.
ZoomGrants Guudmarka Codsiga Horumarinta Mustaqbalka (PDF)